Thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé 5, 6 tháng chi tiết 30 ngày | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé 5, 6 tháng chi tiết 30 ngày | Muasalebang in Muasalebang
Ukulunyulwa kwesitayela saseJapane okwamanje kuyindlela yokulumula omama abaningi baseVietnam abayifunda futhi bayisebenzise ezinganeni zabo. Isihloko esilandelayo singathanda ukwabelana ngamamenyu okulunyulwa ezingane ezinezinyanga ezi-5, 6 ezinsukwini ezingu-30 zokuqala agcwele imisoco ukusiza ingane yakho ikhule ngokugcwele ngokomzimba nangokomqondo. Sikumema ukuthi uxhumane.
1 Qaphela ukuthi omama kudingeka baqonde lapho besebenzisa indlela yaseJapane yokulumula
1.1 Ukudla kwengane isonto ngalinye lapho idla ukulunyulwa ngendlela yaseJapane
1.2 Amaresiphi okupheka amanzi eDashi lapho uncelisa ingane yakho isitayela saseJapan
1.3 Ukudla izingane zingakudla kusukela ezinyangeni ezingu-5-6
1.4 Amathuluzi asetshenziselwa ukulungisa ukudla kwezingane
2 Imenyu yokulumula yesitayela saseJapan yezingane ezisukela ezinyangeni ezi-5-6 ngokuningiliziwe izinsuku ezingama-30
3 Imenyu yokulumula yesitayela saseJapan yezinyanga eziyi-7 ingane
4 Imenyu yokulumula yesitayela sase-Japan yezingane ezinezinyanga eziyi-8 ubudala
5 Imenyu ye-ADKN yesikhathi sezinyanga eziyi-9-11
Qaphela ukuthi omama kudingeka baqonde lapho besebenzisa indlela yaseJapane yokulumula
Yenza uhlelo lwezikhathi olufanele lomthetho, inani lokudla kanye nenani lezikhathi okufanele udle ngazo ukuze umntwana akwazi ukukujwayela.
Ukudla kulesi sigaba sokujwayela kufanele kugaywe kahle, kuhlungwe futhi kube ngendlela exubile.
Umama kufanele aqale ngesamba esincane (cishe ½ ithisipuni) bese egcina izinsuku ezingu-3-4 futhi kancane kancane ande nenyanga ngayinye yobudala.
Ngaso sonke isikhathi yiba nezinhlobonhlobo zokudla ongakhetha kukho, ukudla okuthandwa ingane yakho kanye nalokho okungenzeka ukuthi ayizwani nakho noma engathandi ukukudla.
Izingane zihlala njalo esihlalweni sokudlela futhi zidle uhlobo ngalunye lokudla ngokwehlukana esigabeni sokuqala
>> Joyina Iqembu: Ukudla ukulunyulwa ngaphandle kwezinyembezi ukufunda nokwabelana ngolwazi lokunakekela izingane ngesikhathi sokulunyulwa.
Ukudla kwengane isonto ngalinye lapho idla ukulunyulwa ngendlela yaseJapane
Enyangeni yokuqala yokuvumela ingane yakho ukuthi ijwayelane nayo, masenze uhlelo lwezikhathi ukuze ibe nohlaka lwesikhathi oluthize kanye nohlelo.
Isonto 1: Vumela ingane yakho ukuthi ijwayelane nephalishi elimhlophe elihlungwa ngesilinganiso esingu-1:10 futhi lidle u-5ml – 10ml. nsuku zonke
Isonto lesi-2: Umama angakwazi ukwandisa inani lephalishi elimhlophe elihluziwe libe ngu-15-25ml bese engeza imifino ehlungiwe njengezaqathi, ithanga, i-chayote, utamatisi ngenani elingaba ngu-5ml kumenyu yengane.
Isonto lesi-3: Khulisa inani lephalishi elimhlophe libe ngu-30-40ml futhi uhlanganise imifino nenani elingu-10ml njenge-kohlrabi, i-chayote, isipinashi, isipinashi.
Isonto lesi-4: Umama ugcina uhlobo olufanayo nobuningi njengasevikini lesi-3
Ngokulunyulwa kwesitayela sase-Japanese, iphalishi elimhlophe lihlala liphekwe ngesilinganiso esingu-1:10 noma 1:9 evikini eledlule, futhi lihlungwa kahle, lixutshwe namanzi e-dashi ukuze linciphe.
Amaresiphi okupheka amanzi eDashi lapho uncelisa ingane yakho isitayela saseJapan
Iresiphi 1: Izaqathi, amazambane, i-chayote, ubhontshisi.
Iresiphi 2: i-kohlrabi, iklabishi, i-broccoli, emhlophe
Indlela yesi-3: U-anyanisi, iklabishi, isithombo esimhlophe
Iresiphi yesi-4: Izinhlobo zomhluzi wemifino njenge: imifino, isipinashi
Iresiphi 5: Ukusebenzisa i-dashi powder yaseJapane egxilile exutshwe namanzi e-dashi, kulula kakhulu futhi yonga isikhathi.
Iresiphi 6: Ukupheka i-dashi kusuka kunhlanzi egayiwe kanye nezimila zasolwandle ezijwayelekile ngokusho komama baseJapan
Ukupheka amanzi eDashi emifino
Ukudla izingane zingakudla kusukela ezinyangeni ezingu-5-6
Kungakhathaliseki ukuthi iyiphi indlela yokulumula omama abayisebenzisayo, kusadingeka baqinisekise ukuthi ukudla kwezingane zabo kugcwele la maqembu alandelayo ezakhamzimba:
Isitashi: iphalishi elincane (irayisi), isinkwa, i-vermicelli, i-vermicelli, ubhatata, ubhanana, amazambane, i-taro, i-taro
Iphrotheni: I-Tofu, isikhuphasha seqanda, inhlanzi, iyogathi, ushizi, inhlanzi emhlophe, uphizi, amashiphu ezinhlanzi ezomisiwe shirasu
Ivithamini: isipinashi, ithanga, utamatisi, isanqante, i-broccoli, iklabishi, isithombo, u-anyanisi… noma izithelo ezifana ne-apula, iwolintshi, i-strawberry, i-tangerine
Amathuluzi asetshenziselwa ukulungisa ukudla kwezingane
Ukuze ulungiselele ingane ukuba idle ukulunyulwa kwesitayela saseJapane, umama udinga ukuthenga okungenani amathuluzi alandelayo:
1. Ibhodwe lokupheka uphuthu, ibhodwe lophuthu
Omama bangathenga ibhodwe lephalishi abazoliphekela ingane yabo kanye ezinsukwini ezimbalwa, ngokuhlukanisa okuphakelayo ebhokisini ngalinye futhi bakugcine ekhabetheni. Le ndlela ilungile, yonga isikhathi sikamama, kodwa ukutshalwa kwezimali ebhodweni kuphakeme kancane. Ngakho kukuwe ukuthi ukhethe.
Ngokwami ​​ngithenga izinkomishi zephalishi likaPigeon noma izinkomishi zikaRichell….ungakhetha noma yiluphi uhlobo. Vele ulinganise irayisi namanzi ebhodweni futhi ukubeke ku-rice cooker ukuze upheke nelayisi lomndeni. Lapho irayisi selivuthiwe, irayisi elisethini libuye libe iphalishi. Kushibhile ukuthenga inkomishi ekuvumela ukuthi upheke ukudla okuncane nsuku zonke ukuze uqinisekise ukuthi ingane yakho ihlale ithola ukudla okusha.
2. Izinsiza zokucubungula ukudla
Omama bangasebenzisa i-blender, kodwa mina ngokwami ​​angiyisebenzisi ngoba ihlanzekile kakhulu futhi ingane ayizizwa kahle. Ngaphezu kwalokho, angikwazanga ukulungisa ubuqhophololo bokudla ngendlela engangifuna ngayo, ngakho ngatshala imali ekhithi yokucubungula ukudla. Le sethi ingeyami ka-richell Japan. Iqukethe isitsha sokugaya esinemifantu eminingi, i-pestle yokhuni yokugaya ukudla, isisefo esinetafula lokugaya, i-grater yewolintshi.
Bona ezinye izindlela zokupheka zama-snack zaseJapan lapha
3. Izinkomishi, izinkezo zengane ezodla ilunyulwa
Ngalokhu, abazali bangasebenzisa njalo izitsha abazifunayo emndenini. Nokho, ngisakhethela ingane yami isethi ehlukile yezinkomishi nezinkezo. I-spoon engiyithengile iyisipuni se-silicone se-Munchkin esithambile ukuze ingane yami idle ngaphandle kokulimaza izinsini njengesipuni sensimbi engagqwali ekhaya. Ngiphinde ngikhethe izitsha zepulasitiki ukuze ingane ingaphuki futhi incane futhi inhle ukugqugquzela ingane ukuba idle.
4. Isihlalo sokudlela
Ngiyesaba kakhulu isigameko lapho ngibambe ingane yami ngibambe indishi yempuphu nephalishi ukuze ngihambe ngiphakela ingane yami, noma kufanele ngijahe ingane ukuze ngiyifunze ucezu olulodwa ngesikhathi. Ngakho lapho nje umntwana ehlala futhi eqala ukudla ukudla okuqinile, ngathenga isihlalo futhi ngamvumela ukuba adle lapho, uzowenza kalula lo mkhuba omuhle. Isihlalo engisithengile yisihlalo esinobude obuphakeme futhi obuphansi futhi singasetshenziswa kuze kube yilapho umntwana eseneminyaka emithathu ubudala. Ngaphezu kwalokho, yenziwe ngepulasitiki, ngakho lapho ingane idla, ingahlanzwa kalula. Ungakhetha phakathi kwezinhlobo ezi-2 zeMastela noma I-Hanbei.
Bona imikhiqizo engcono kakhulu yezihlalo zokudlela zezingane ngentengo engcono kakhulu
Ukuze kungadingeki ukuthi ushintshe zonke izingubo zengane ngemva kokudla ngakunye, omama kufanele basebenzise amabhibhu kumntwana. Amabhibhi anezinhlobo eziningi njengendwangu, inayiloni, noma amabhayi epulasitiki anemikhombe. Mina ngokwami ​​ngisebenzisa Miles Bibs With Troughs ukuze kube lula ukuhlanza ngemva kwalokho. Nokho, uma kuyiqiniso ezindinganisweni zaseJapane, kufanele usebenzise amabhibhu endwangu 🙂
Ukubuyekezwa kwe-Heinz yokulunyulwa kwempushana kuhle?
Iluphi uhlobo lwempushana yomntwana olungcono kakhulu?
Amaqebelengwane ezingane angcono kakhulu enyanga ngayinye yobudala
Imenyu ye-BLW yokulumula ingane enezinyanga eziyisi-6
Imenyu yokulumula yesitayela saseJapan yezingane ezisukela ezinyangeni ezi-5-6 ngokuningiliziwe izinsuku ezingama-30
Ngezansi kunemenyu ka-Mama An yezinsuku zokuqala ezingu-30 zokulunyulwa kwesitayela sase-Japanese ongabhekisela kukho.
Imenyu yokulumula yesitayela saseJapan ngosuku loku-1, usuku lwesi-2, usuku lwesi-3: iphalishi elihlungiwe liphekwe ngesilinganiso esingu-1:10. Inani elidliwayo yisipuni esisodwa ngesikhathi ukuze ingane ijwayele
Usuku lwesi-4, usuku lwesi-5 lisesefa iphalishi elihluziwe eliphekwe ngesilinganiso esingu-1:10 futhi lenyuke laba yizinkezo ezi-2/ngesikhathi.
Usuku 6: iphalishi elimhlophe elinesilinganiso esingu-1:10 elihlungwe kahle, ithanga elishuthiwe lihlungwe kahle
Usuku lwesi-7: iphalishi elimhlophe 1:10 lihlungwe kahle ngesipinashi esisiyisisiwe esihlungwe kahle kanye nethisipuni elilodwa lezaqathi ezihlungwe kahle.
Usuku 8: Iphalishi elimhlophe 1:10 lisefa nge-broccoli eshisiwe kahle kanye nobhanana ohluziwe ukuze uthole idessert.
Usuku lwesi-9: Iphalishi elixutshwe nesipinashi esihlungwe kahle kanye nophudingi olunopopo olugayiwe lusefa ngemeshi.
Usuku lwe-10: Ubhatata oshisayo, uhlungwe kahle uxutshwe nejusi ye-apula, uphakwa ngesithombo esimhlophe esishisayo, uhlungwe ngemeshi.
Usuku lwe-11: Ubhatata ofakwe isitimu, ocushwe kahle oxutshwe nejusi ye-Dashi kanye nophudingi nejusi yepheya ephuzi.
Usuku lwe-12: Iphalishi elimhlophe lisefa ngo-1:10, linikezwe nge-tofu ne-tomato sauce, lihlungwe ngemeshi.
Usuku lwe-13: Iphalishi elimhlophe 1: 10 lihlungwa nge-bok choy efakwe kahle ehlungwe kahle. Amazambane agayiwe kahle ahlanganiswe neyogathi, i-dessert nejusi yekhabe.
Usuku 14: Iphalishi elimhlophe 1:10 lixutshwe nesinkwa kanye nezaqathi eziphekiwe ezixutshwe neyogathi
Usuku 15: 1:0 iphalishi elimhlophe elixutshwe nesipinashi, ubhanana oxutshwe neyogathi ukuze uthole uphudingi
Usuku 16: 1:10 iphalishi elimhlophe elixutshwe ne-broccoli ehlungwe kahle, ephakelwa izaqathi ezigayiwe ezihlungwe ngemeshi.
Usuku 17: iphalishi elimhlophe elihlungwe kahle 1:10, upopo ohlungwe kahle, ijusi yepheya ephuzi ukuze uthole uphudingi.
Usuku 18: Inja emhlophe 1: 10 ihlungwe kahle, isanqante nejusi yepapaya kuhlungwe
Usuku lwe-19: Iphalishi elimhlophe 1:10 hlanganisa utamatisi ohlungwe kahle, ubhatata oshukiwe oxutshwe nejusi yewolintshi.
Usuku 20: Iphalishi elimhlophe 1:10 lihlungwe kahle lixutshwe ne-tofu, isipinashi, uphudingi ohluzwe kahle lukabhanana
Usuku 21: Iphalishi elimhlophe, isilinganiso 1:10, lihlungwe kahle ngobhontshisi we-cove, ithanga eliphekiwe elithambile bese lihlungwa.
Usuku lwama-22: iphalishi elimhlophe elihluziwe elixutshwe nemifino exutshwe, ubhatata oshunqisiwe ohlungwe kahle.
Usuku 23: Iphalishi elimhlophe 1:10 elixutshwe nekholifulawa egayiwe, ijusi yekhabe yokwenza idessert.
Usuku 24: Iphalishi elinesinkwa sikabhanana esigaywe kahle, ukholifulawa, ubhontshisi we-cove namanzi eDashi.
Usuku 25: Iphalishi elimhlophe elihlungwe kahle elixutshwe ne-bok choy, i-tofu egayiwe, uphudingi wepapaya oluhluziwe.
Usuku 26: Iphalishi 1:10 isipinashi esihlungwe kahle, ithanga elishunqiselwe kahle
Usuku lwama-27: Iphalishi lesipinashi le-Troonjn nesobho likakherothi nezambane
Usuku 28: Ama-noodle athambile ahlanganiswe namanzi e-Dashi ahlungwe kahle, idessert yobisi lwebele oluhluziwe.
Usuku lwama-29: I-Carrot Udon eShredded, Isobho Sommbila kanye neDessert Kiwi eluhlaza.
Usuku lwama-30: iphalishi lembewu ye-lotus, ukhamba olubilisiwe oluhlungwe kahle, ubisi lwebele oluhlungwe kahle.
Imenyu yokulumula yesitayela saseJapan yezinyanga eziyi-7 ingane
Kulesi sigaba, umama angashintsha indlela yephalishi elimhlophe ngesilinganiso esingu-1: 9 futhi ahlungwe kahle, axube amanzi eDashi njengalapho izinyanga eziyisi-6.
Imifino kamama ingagaywa kahle futhi yondliwe enganeni.
Kulesi sigaba, umama angakwazi ukwengeza inyama, inhlanzi, namaqanda ekudleni komntwana ukuze anikeze umsoco ongcono wengane.
Nazi ezinye iziphakamiso zamamenyu okulunyulwa esitayela sase-Japan ezingane ezinezinyanga ezingu-7 ongabhekisela kuzo:
Isobho lamazambane, uphizi, iyogathi
Iphalishi lenkomo eline-amaranth, ubhanana ovuthiwe osikiwe
Iphalishi yenkukhu, iklabishi, i-papaya evuthiwe eqoshiwe
Isobho sembewu ye-pumpkin lotus, isobho lenyama yenkukhu
Inyama yenkukhu iphalishi likabhatata eliphekwe ngethanga kanye ne-strawberry puree
Iphalishi le-okra elinokhula lwasolwandle, umango ovuthiwe oqotshiwe
I-salmon porridge, imifino eshisayo, iyogathi
Iphalishi ne-okra, ithanga, iyogathi
Isobho le-salmon amazambane kanye ne-susu ebilisiwe.
Isobho lezinhlanzi nemifino, iyogathi, isinkwa
Imenyu yokulumula yesitayela sase-Japan yezingane ezinezinyanga eziyi-8 ubudala
Kulesi sigaba, uma umntwana edla kahle, umama angase angasadingi ukusefa iphalishi, kodwa iphalishi kufanele liphekwe kahle, libushelelezi futhi libe likhulu.
Imifino nezithelo zingachotshozwa ngaphandle kokuhlunga.
Omama bangandisa inani lokudla futhi bengeze inyama, inhlanzi namaqanda kumenyu yengane.
Nawa amamenyu aphakanyisiwe omama abangabhekisela kuwo.
I-Straw mushroom yenkomo iphalishi, isobho lethanga
Isobho likaphizi oswidi
I-porridge fish, imifino, iklabishi elibilisiwe.
Iphalishi, i-salmon, i-cauliflower
Iphalishi elinamaqanda, ubhatata, nesithelo sikadrako, lisikwe libe izingcezu ezincane
Iphalishi lama-shrimp, ithanga kanye ne-chayote ebilisiwe
Iphalishi le-crab, isobho le-rambutan
Isobho se-potato tofu, amagilebhisi ahhafu
Imenyu ye-ADKN yesikhathi sezinyanga eziyi-9-11
Kulesi sigaba, ukuqina kwengane kuye kwanda kakhulu, ngakho-ke umama angakwazi ukwethula umntwana ephalishini lokusanhlamvu, irayisi elichotshoziwe kanye nemifino egayiwe nezithelo ngendlela yamabha abilisiwe noma ashisiwe ukuze umntwana adle.
Nawa amamenyu afanele izingane ezinezinyanga ezingu-9 kuya phezulu omama abangabhekisela kuwo.
Ama-noodle athosiwe ngenyama yenkomo, utamatisi, iyogathi
Irayisi eligayiwe, isipinashi, inkukhu, upopo ovuthiwe
Iphalishi elimhlophe, inyama yenkomo ethosiwe, ithanga elishisiwe, na
Irayisi elichotshoziwe, ingulube egayiwe, i-zucchini, amagilebhisi abomvu
Iphalishi le-salmon, imifino eshisayo
Irayisi elichotshoziwe, ukhula lwasolwandle, ama-meatballs enkukhu
Iphalishi lenkalankala yolwandle, isobho lemifino, iyogathi
Isobho lenkukhu, ummbila omnandi, iyogathi
Irayisi elichotshoziwe, inhliziyo yenkukhu, i-chayote ebilisiwe, i-sapodilla ephekiwe.
Irayisi elichotshoziwe, i-salmon e-pan-fried, isipinashi esishisayo.
Ama-noodle athosiwe ngenyama yenkomo, amakhowe, i-kiwi yegolide
Irayisi elichotshoziwe, ukhula lwasolwandle, iqanda elithosiwe, upopo ovuthiwe
Irayisi elichotshoziwe, amabhola enkomo, i-broccoli,
Iphalishi elimhlophe inyama yenkomo egayiwe, iklabishi
Ilayisi elichotshoziwe, inhlanzi kanye nezithelo ku-tomato sauce, ubhontshisi we-cove oshisayo.
I-athikili engenhla isifinyezo samamenyu okukulunyulwa esitayela sase-Japanese wezingane ngokwenyanga yobudala omama abangabhekisela kuwo futhi bawasebenzise ezinganeni zabo. Inhlanhla bomama.
Xem Thêm Top 5 màu son Charlotte Tilbury đẹp thu hút nhất hiện nay | Muasalebang